Mandeha be mantsy ny resaka ankehitriny fa rehefa tsy mety manome ilay vola ana miliara maro (10 raha ny tsilian-tsofina heno) izy mba ho solon’ny famotsorana azy, dia hotazonina ela ary hohalavaina hatrany ny fijanonany ao Tsiafahy.
BEN’NY TANANAN’I TOAMASINA
Mety mbola misy toky ihany ny hiverenan’ny ben’ny tanànan’i Toamasina eo amin’ny toerany raha toa ka mitsipaka ny fanapahan-kevitry ny tanàna ny prefeketioran’io tanàna io. Mitohy ny fifampihantsiana sy ny fifandrahonana eo amin’ireo samy mpitantana ny tanàna ankehitriny. Tonga hatrany amin’ny fikasana hitory ny tahirimbolam-panjakana mihitsy ny raharaha satria raha ny fihevitry ny ben’ny tanàna dia io no tena sakana tamin’ny tsy fahafahana nandoa ny karaman’ny mpiasa.
MALAZA ANY BELGIQUE
Lasa vaovao malaza erak’i Belgique ankehitriny ny momba ireo zaza tsy ampy taona roa notazonin’ny dadany an-keriny tany Mahajanga. Ireo telo mianaka Belge ireo dia lasa miady an-trano ankehitriny rehefa lasa nampodian’ny olona avy amin’ny alalan’ny tsipaipaika ny iray tamin’izy ireo. Nanao ampamoaka amin’izay ilay tovolahy kely ary mifatratra any amin’ny rainy avokoa. Fa ny tena ratsy dia adin’ny mpianakavy kely no lasa manaratsy endrika an’i Madagasikara.
RAHARAHA ARNAUD TOAMASINA
Velon-taraina mafy ny dadan’i Arnaud, rain’ilay zaza nisy naka an-keriny tany Toamasina fa manjaka loatra ny tsimatimanota eto amin’ny firenena. Efa hita miriaria ary nahazo MOP sahady ireo tompon’antoka tamin’ilay raharaha nahafaty ny zanany vavy Annie. Nisy vehivavy mpanolotsain’ny filoha teo aloha voasaringotra amin’ity raharaha ity ihany koa tsy mba samborina na hanaovana fanadihadiana, hoy izy na efa marobe aza ny porofo. Mitaky ny hametrahana ny tena fanjakana tan-dalàna ny dadan’i Arnaud.
NY DINA NO VAHAOLANA
.Ny fametrahana ny Dina ihany no vahaolana amin’ny tsy fandriampahalemana mirongatra amin’izao, hoy ny kolonely Ravoavy Zafisambatra, talen’ny angom-baovao eo anivon’ny zandary. Miaiky izy ireo fa tsy mahavita irery ny fametrahana ny filaminana kanefa izany ny andraikitra voalohany hametrahana azy ireo. Matoa mbola misy ny tranga maro be tahaka izao, mila mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay sy ny fokonolona rehetra.
Manda mafy ny sendikan’ny mpitsara fa tsy izy ireo no tompon’andraikitra mivantana amin’ny famotsorana ireo olona matetika meloka kanefa votsotra rehefa tonga eny amin’ny fitsarana. Mitompo teny fantatra izy ireo fa ny lalàna ihany no arahina ary vokatry ny fanadihadiana rehetra izay efa nataon’ireo mpanao fanadihadiana ihany no raisin’izy ireo. Nilaza ny filoha lefitry ny Smm fa aleo mamotsotra olona meloka toy izay managadra olo-marina. Rahoviana ihany vao tena hanjaka ny tany tan-dalàna raha izany ny fisainan’ny mpitsara ?
NY MPONINA NO MANAO FISAFOANA
.Efa ny mponina sy ireo vatan-dehilahy sisa ao amin’ny fokontany Ouest Mananjara no manao ny fisafoana amin’ny alina amin’izao noho ny tsy fandriampahalemana mirongatra. Tsy mba hita izay fandraisan’anjaran’ny mpitandro ny filaminana kanefa efa maro ireo namoy ny ainy sy niharam-boina tao amin’ilay fokontany. Mbola manamafy ny antso amin’ny fanjakana hamerenana ny tobin-janaparitra (poste avancé) ny mponina.